यहाँ पनि मोबाइल कै कुरा । मोबाइल अर्थात अहिले हामीले भोगिरहेको नेटवर्क को समस्या । हुन त यहाँ कुरा गर्नलाई विषयको खाँचो छैन । विषय प्रशस्त छन्: जस्तो कि, यहाँ को लोडसेडिङ, अनि दिनैपिच्छे बन्द भैरहने बजार र राजमार्ग, डान्सबार को रात्रिजिवन मा बन्देज लागेपछि को अवस्था, क्यासिनो काण्ड,फुटपाथको आन्दोलन, अनि राजनितिक दाउपेचहरु, खानेपानीको समस्या, अनि बेला-बेला उपराष्ट्रपति को बोलि ले ल्याउने तरंग, अनि कोही लुटिइरहेका, कोही मरिरहेको अवस्था आदि ईत्यादी ! यहाँ समस्याको जालो मात्र देखिन्छ तर नेताले गर्ने प्रत्येक भाषण मा "नयाँ नेपाल" भन्ने शब्द हुन्छ, जुन सुन्दा साह्रै कर्णप्रिय लाग्छ तर व्यवहारमा लागु नभइदिनाले गर्दा हामीले मनको लड्डु घिउ सँग खाएर बस्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।
लोडसेडिङ को कुरा पुरानो भै'सक्यो भन्दा हुन्छ र अब लोडसेडिङ बाट पार पाउन कम्तिमा पनि ४-५ वर्ष कुर्नुपर्छ रे ! अनि बारम्बार हुनेगरेको बन्द को महिमा पनि कम छैन । तर एउटा कुरा चाँहि उदेक के छ भने, काठमाडौँ उपत्यका मा गरिएको बन्द १-२ दिन मै पारलाग्छ तर विभिन्न जिल्लामा हुने बन्दहरु भने निकै लामो समयसम्म लम्बिने गरेकाछन् ।
आज पनि काठमाडौँ मा क्यासिनो व्यवसायीले हंगामा गरे रे, मोटरसाइकल र टेम्पुको त बेहाल नै गरिदिएछन्, अस्ति पुलिस क्यासिनो पसेको रिसमा । त्यस्तै मौलाएको कुरा भनेको राजमार्ग बन्द हो, गाडि दुर्घटना भै'हाल्छ, दुर्घटना जानि-जानि गराउने त पक्कै होइन तर पनि अलिकति केही हुने बित्तिकै यहाँ बन्द भैहाल्छ । मान्छेहरु जोक गर्छन्: लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी छाडातन्त्र, अनि यसै विषयलाई सोच्ने हो भने यो समस्या ले ठूलै रुप लिइसकेको छ । अनि यो त एउटा व्यवस्थालाई नै ठाडो चुनौति हो ।
हैन, हुन पनि किन सबैकुरा बेहाल र अस्तव्यस्त भएको होला ? जस्तो मोबाइल को नेटवर्क कै कुरा गर्ने हो भने पनि, किन यस्तो गाह्रो भएको फोन लगाउन । अहिले त यहाँ यतिसम्म भैसक्यो पिक आवर भन्दा बाहेक का समयमा पनि फोन एकैपटक डायल गरेको भरमा ठाउँ मा पुग्दैन । बारम्बार डायल गरेपछि बल्लतल्ल कुरा हुन्छ तर कुरा पुरा गर्नपाइन्छ, पाँइदैन ठेगान छैन । फोन मा राम्रोसँग कुरा गर्न भाग्यमै लिएर आउनुपर्छ ।
अब यहाँ मैले केही दिन यता भोगेको नेटवर्क को समस्या राख्दैछु । हप्‍तादिन अघि बिहान एउटा साथीलाई फोन गरेँ, उताबाट एक महिला को स्वर आयो, अनि मैले साथीलाई खोजेको बताँए, उनले भनिन्, मेरो मोबाइलमा गरेर कस्लाई खोजिरा' अनि काम पाउँदैनस् भन्दै सराप्दै थिइन्, मैले फोन काटिँदिए । पछि साथीलाई सोधेँ, उसले भन्यो-"मैले फोन उठाएर बोलिरहेकैँ थिए, तिमिले मैले बोलेको सुनेनौ तर मैले सबै सुनिरहेको थिँए ।"
त्यस्तै, ३ दिनअघि एउटा साथीलाई फोन गरेँ । त्यो दिन साह्रै अचम्म भयो: मैले दिउँसो १२ बजेदेखि फोन ट्राई गरेँ १ बजेसम्म तर लागेन, अनि टेलिकम कि मैँया ले पनि केही बोलिनन् । साह्रै थकित भएँ, फोन नलाग्दा अनि जुन काम का लागि फोन गरेको थिँए, त्यो काम पनि बिर्सिँए भन्दा हुन्छ । ट्राई गरेको १ घन्टा पछि काँइकुँइ गर्दै फोन त लाग्यो तर उताबाट हेलो भन्ने आवाज आयो, अनि टेलिकम की मैँया गजब ले बोलिन । "मोबाइल स्विच अफ गरिएको छ" अनि लगत्तै भनिन्, " रुटको व्यस्तताले सम्पर्क हुन सकेन", "ट्राइ गर्नुभएको मोबाइल व्यस्त छ" यस्तै ४-५ थरिका डाइलगहरु लगातार आए, टेलिकम को तर्फबाट । छक्क परेँ, अरे ! कम्प्युटर पनि झुक्कीएछ, एउटा भनेको कुरा गल्ति भयो होला भन्दै, भएभरका सबै डाइलग एकैपटक भन्दियो !
घरबाट फोन आएको थियो, मैले कल एसेप्ट गरेर कुरा गरिसँके अनि उताबाट पनि आवाज आइसक्यो, तर मेरो कल होल्ड मा देखाइरहेको छ, म कुरा गरिरहेकोछु, घर कै त्यही एकै नम्बरबाट फेरी फोन आइरहेको छ । यस्तै यस्तै धेरै पटक यस्ता समस्याहरु भोगिसकिएको छ, अनि भोगिनै रहेको छु । थाहा छैन, कहिले सम्म मोबाइलमा नेटवर्कको समस्या झेलीरहनु पर्ने हो । साँच्चै भन्दा टेलिकमले आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा कहिले ध्यान दिने हो ?
Related Post:मोबाईल को चर्तिकला
Prabesh November 2, 2008 at 11:08 PM
नेपालीको मोबाइल "मेरो मोबाइल"
अलिकति धेर पैसा तिर्नुस्, गुणस्तर पाउनुस् !!
किन टेलिकमकै पछि धाउनु त हौ, यसो निजी क्षेत्रतिर आँखा लाए भैहालो नि । जताको राम्रो छ त्यतै जाऔँ न । यो टेलिकमलाई सरापेर मात्रै के गर्नु ?? धित मर्ने गरी सबैलाई बोक्न दे'कै छ नि ! सिम नबाँड्दा पनि बोक्न दिएन भनेर किचलो, बाँड्दा पनि सुख छैन । के चैँ गर्नु त यो बिचरा टेलिकमले पनि ? 'मेरो मोबाइल' बोकौँ न आनन्द छ ।
Dilip Acharya November 3, 2008 at 7:13 AM
मोबाईको यो समस्या पनि करिव करिव 'दिर्घ रोग' जस्तै भैसकेको छ । तर उजेली जी ले भने जस्तै सिम नबाँड्दा पनि आन्दोलन नै हुन्छ अनी बाँडे पछि त यस्तै त हो ...
Krishna November 3, 2008 at 8:59 AM
अब नेपालको मोवाइलको प्रसंगमा मलाइ चाही के कुरा गर्न मन लाग्यो भने मोवाइलमात्र हो अन्य सेवा जुन दिन मन छ भने पूर्ण रूपमा दिनु नभए नदिएकै वेश पाहिले पाहिले हाम्रा हजुरबुबा हरुले पत्र लेखेर पनी ख़बर आदान प्रदान गरेकी थिए क्यारे अब अहिले हात हात मा मोबाइल भएर पनी कुरा गर्न पईदैना एसो बिचार गर्दा ता पाहिले को हजूर बुबाहरुको पालो को तरीका ठीक लाग्यो कम से कम भन्ना खोजेको कुरा त सही पुगात्यो हैन रा ?
Aakar November 3, 2008 at 5:52 PM
"माफ गर्नु होला, तपाईंले संपर्क गर्नुभएको मोवाइलवाला धेरै पिएर नालीमा लडी रहनुभएको छ,कृपया कुकुरले तुक्र्याएपछि पुन प्रयास गर्नुहोला, धन्यवाद ।"
"माफ गर्नुहोला, तपाईंले संपर्क गर्न खोज्नु भएको मोवाइलवालाले छैन भनिदिनु भन्नुभएको छ, हुनुहुन्न रे, धन्यवाद ।"
"माफ गर्नुहोला, तपाईंले संपर्क गर्न खोज्नु भएको मोवाइलवालाले मोबाईलको बिल नतिरि भाग्नु भएकाले संपर्क हुन सकेन, बिल तिरेपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला, धन्यवाद ।"
"माफ गर्नुहोला, तपाईंले संपर्क गर्नखोज्नुभएको मोवाइलवाला भन्न नमिल्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, सकिइसकेपछि पुन प्रयास गर्नुहोला ।"
"माफ गर्नुहोला, तपाईंले संपर्क गर्नुभएको मोवाइलवाला कान्छी लिएर बेपत्ता भएको ३ हप्ता भैसक्यो, जेठीले भेटेर खप्परफोरेपछि पुन प्रयास गर्नुहोला, धन्यवाद ।"
मनोज गजुरेल को शब्द सापटि
HapiBlog November 9, 2009 at 1:25 PM
Tapai ko blog post haru ekdam ramailo cha.. Yedi chahanu huncha vane tapai ko blogroll ma mero blog rakhi dinu hola :)
Aakar November 9, 2009 at 3:24 PM
I've already added your blog.